Valve Have Communication Problem Again - Real Gaming Myanmar
မပြောမဆိုပဲလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးကိုမပြင်တာကြောင့် ပြသနာထပ်တက်နေတဲ့ Valve
အစက ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ Spring Tour ကို ဖေဖော်ဝါရီလလယ်လောက်က Roster Lock တွေအပြီးမှာ Division II အတွက် Open Qualifier တွေနဲ့စတင်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာပါ။
ပုံမှန်အတိုင်းဆို ဘာပြသနာမှမရှိပဲ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ လည်ပတ်နိင်ခဲ့မှာဖြစ်ပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း Valve က လမ်းခုလတ်မှာ မပြောမဆိုနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေထလုပ်ခဲ့လို့ အကုန်ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် Roster Lock က First Major အပြီးမှာ လုပ်ကြရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် Covid အကြောင်းပြချက်နဲ့ မေဂျာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အပြင် Regional Finals တွေကိုအစားထိုးခဲ့တဲ့ကြေငြာချက်ကိုလည်း ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပြောသင့်တဲ့သူတွေကိုမပြောခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် Regional Finals တွေက သူ့ Region အလိုက် အချိန်ဇယားတွေကိုတိုင်ပတ်စေခဲ့ပြီး Region တော်တော်များများမှာ ဘယ်နေ့ကို Roster Lock လုပ်ရမှန်းမသိတွေ ဖြစ်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။
NA က အသင်း ၃ သင်းဖြစ်တဲ့ Darwashan, Lets Go(Team Magnus) နဲ့ Sneake တို့ဟာ အဲ့ဒီဒဏ်ကို ကောင်းကောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
Team Magnus ဆို Roster Lock နဲ့ ဘယ်လောက်ထိတိုင်ပတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ ESL ကတောင် Smurf Account နဲ့ကစားပြီး Open Qualifier ကနေစကစားဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။
အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ရတာကြောင့် NA Scene က တခြား Player တွေက Social Media ပေါ်မှာ အဲ့ကိစ္စကိုဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ခဲ့ကြတာကြောင့် ESL အနေနဲ့ အဲ့လိုမျိုး Smurf Account တွေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အသင်းတွေကို DQ ပြန်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့လိုတွေ ပွဲစဉ်တွေက ကစားပြီးတဲ့အချိန်ကြမှ DQ ပြန်လုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် အကုန်လုံးရှုပ်ထွေးကုန်ပြီး ESL ကိုရော Valve ကိုပါဝေဖန်သံတွေက တော်တော်လေးဆူညံသွားခဲ့တာပါ။
ဒါ့ကြောင့်အရင်းစစ်လိုက်ရင် တရားခံက ဘာမှမပြောမဆိုပဲထထလုပ်တတ်တဲ့ Valve ပါပဲ။
အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာက Valve အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပဲ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်း ခဏခဏကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Valve ကြောင့်ပြသနာတွေတသီကြီးတက်ခဲ့ရတဲ့ ESL အတွက်ကလည်း Valve ဆေးထိုးခံရတာ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ 2021 မေလက Western/Eastern Europe DPC League တွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာ Valve ရဲ့ညွှန်ကြားမှုကနေတဆင့် ESL နဲ့ DreamLeague တို့က ပါဝင်ကစားနေတဲ့အသင်းတွေဆီကို Rule ပြောင်းတဲ့ Email ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Ruleကတော့ နည်းပြတွေကို Official Match တွေမှာ အသင်းသားတွေနဲ့ Communicate ပေးလုပ်တဲ့ Rule ပါ။
ဒါပေမယ့် အဲ့လို Rule မျိုးက Dota2Pro Scene မှာတခါမှမရှိခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် အသင်းတွေကိုပို့တဲ့ Mail ထဲမှာ တခြား General ကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ရောပြွမ်းပြီးပါလာတာကြောင့် အသင်းတော်တော်များများက သတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် Alliance ကတော့ အဲ့အခွင့် အရေးကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိင်ခဲ့ပြီး အကျိုးအမြတ်တချို့ကိုလည်း ရှာဖွေနိင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဝေဖန်တာကို တော်တော်လေးခါးစီးခံခဲ့ရပြီး အဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ Valve ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာဒီ Rule ကိုပြန်ဖယ်ဖျက်ခဲ့တာကလွဲရင် ဘာမှမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကလည်း ESL One Katowice Major မှာ ESL က သူတို့ရဲ့ Official Broadcast ကလွဲရင် တခြား Streamer တွေကိုပြသခွင့်ပိတ်ခဲ့လို့ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားပြီး Community က ဝိုင်းအမဲဖျက်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒါကလည်း ESL က Valve ရဲ့ Statement ကမရှင်းလင်းမပြတ်သားခဲ့တာကြောင့် အဓိပ္ပာယ်ကောက်တွေလွဲပြီး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အဲ့လိုအနေအထားရောက်မှ အဓိကတရားခံ Valve က ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး ESL အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဒူးကျိုးမတတ်တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြသနာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် Valve ရဲ့မပြောမဆိုနဲ့လုပ်ချလိုက်တာတွေ၊ မပွင့်တပွင့်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် ကမောက်ကမတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေမနည်းပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် Valve အနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေ၊ Pro အသင်းတွေနဲ့အပြင် Community ကလူတွေနဲ့ပါ ပိုပြီးတော့ Communication ကောင်းကောင်းတွေရှိလာဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဗျာ။
The DPC season 2021-22 Spring Tour was set to kick off with roster locks, followed by open qualifiers for teams vying foraspot in Division II in mid-late February.
Normally, it would run smoothly without any problems, but as usual, Valve madealot of changes in mid-stream, and everything went mess.
Originally Roster Lock should be done after the First Major.
However, the announcement that the major was canceled for Covid reasons and that it replaced the regional finals was not mentioned at the right time.
The regional finals were staggered and hard dates per region, or even globally, were not announced.
That left many in several regions unsure of the roster lock dates.
NA’s three teams, Darwashan, Lets Go (Team Magnus) and Sneake, were well hit.
Team Magnus was so outspoken with Roster Lock that even ESL was allowed to play in the Open Qualifier with Smurf accounts.
While teams were already competing, other players in the NA scene began to complain on social media about the use of smurf accounts in the qualifiers.
ESL then decided to disqualify those teams, despite no hard rules on the subject and having had even approved at least one team to use them.
This is not the first time Valve has done this, and it has been done many times in recent years.
This is not the first time Valve has been made troubles for ESL.
In May 2021, during the Western / Eastern Europe DPC League, ESL and DreamLeague sentachange email to the participating teams, under Valve’s direction.
That rule allowed coaches to communicate with team members in official matches.
However, sucharule has never been seen before in the Dota2Pro Scene, and many teams have not noticed it because it is mixed with other general content in mail sent to teams.
Some did not even know it.
But Alliance made the best use of that opportunity and reaped some of the benefits.
Asaresult, the main culprit, Valve, was later reprimanded, with the exception of repeal of the rule.
Also, four years ago, ESL One Katowice Major became so popular that ESL banned the display of streamers other than their official broadcasts, and the community backlashed ESL.
This is also due to the ambiguity of Valve’s statement from ESL, which is misleading.
The main culprit, Valve, intervened and ESL apologized to the community.
So, if you look at the problems that have occurred, you can see that Valve did nothing to communicate properly with community.
There arealot of things that have caused chaos due to not being open and clear.
That’s why Valve needs more than that.
Valve need to have better communication with Tournament Organizers and pro teams as well as people in the community.